Wershada wiishka iyo wareejinta - Wiishashka Shiinaha iyo soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha
Auger-Nooca wiishka mashiin wareejinta iniinta
Wiishka nooca Auger wuxuu kor u qaadi karaa sarreenka ama galleyda wuxuuna ku sii dayn karaa mashiinka wax lagu farsameeyo ama mashiinnada baakadaha haddii loo baahdo.
Dhererka iyo dhexroorka wiishka waxa lagu beddeli karaa codsiga macmiilka.
Si weyn ayaa loo isticmaali jiray meelo badan. Heerka shaqada ee hufnaanta sare leh oo leh qiime jaban.
DTY-10E baaldi wiish hadhuudh mishiinka
Wiish baaldi taxane DTY waxaa loogu talagalay hawl qaadis toosan oo joogto ah ee budada iyo granular. Waxay si aad ah u khusaysaa qaadista kaydka badan ee dhirta quudinta, warshadda daqiiqda, iyo bakhaarka hadhuudhka ee cabbirka kala duwan.
DTY-10S wiish baaldi abuur hadhuudh ah heerka waxyeelada hoose ee paddy digirta
Fikirka wiishka baaldiga cusub ee DTY waxa uu ka yimid wiishka baaldi ee SATAKE waxaana loogu talagalay in si joogto ah loo qaado hawlgal toosan oo budo ah, granular iyo buro yar. Waxay si aad ah u khusaysaa qaadista kaydka badan ee dhirta quudinta, warshadda daqiiqda, iyo bakhaarka hadhuudhka ee cabbirka kala duwan. Wiishka noocaan ah ayaa si weyn looga isticmaalaa dalka horumaray.
Mashiinka qaadida suunka wiishka ee hadhuudhka qaada
Wiishka jiirada waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado abuurka ama alaabta kale ilaa dherer gaar ah oo aan lahayn waxyeello eber ah, marka la farsameynayo abuur ama walxo kale oo engegan.
Nooca baaldiga wiishka
Wiishka baaldiga nooca Z waa wiishka nooca casriga ah waxaana loogu talagalay in si joogto ah loo qaado hawlgal toosan oo budo ah, granular ah iyo buro yar yar. Waxay si aad ah u khusaysaa qaadista kaydka badan ee dhirta quudinta, warshadda daqiiqda, iyo bakhaarka hadhuudhka ee cabbirka kala duwan.